क्रसर डनको विरोध गर्दा मारिए दिलीप, यी हुन् अन्य पत्रपत्रिकाका समाचार
२६ पुष,काठमाण्डौं । आजका पत्रपत्रिकामा धनुषामा अवैद्य रुपमा खोलामा गिटी बालुवा उत्खनन गरिरहेकाहरुलाई तस्करहरुको बिरोध गर्दा ओम प्रकाश महतो (दिलीप) मारिएको समाचारले प्राथमिकता पाएको छ ।
आफ्नो घर छेउको खोलामा अबैद्य रुपमा उत्खनन भइरहेको थाहा पाएर रोशन यादव र दिलीप उक्त स्थानमा पुगेका थिए । तर, तस्करको समुहले कुटपीट गर्दा दिलीपको ज्यान गएको शनिबारको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
दिलीपलाई कुटन् थालेपछि रोशनले भागेर सोहि वडाका अध्यक्षलाई फोन गरे । दिलीप त्यहि बेहोस भए । मिथिला नगरपालकिा ५ का वडा अध्यक्ष श्यामबाबु यादव तत्कालै घटनास्थलमा आएपनि तस्करले ट्रिपर लिएर क्रसरमा भागिसकेको उनले बताए ।
दिलीपलाई ट्रिपरले किचेर मारिसकेको देखेर वडाअध्यक्ष र रोशन भावुक बने । वडाअध्यक्षले दुईपटक प्रहरीलाई फोन रगेपछि मात्र प्रहरी आएको बताइएको छ । भारतको भोपालमा बिटेक इन्जिनियरिङको अन्तिम सेमेष्टर पढिरहेको दिलीप विदामा घर आएका थिए ।
त्यस्तै अन्नपूर्णमै मन्त्रीलाई गाडीमाथि गाडी भन्ने शिर्षकमा समाचार छापिएको छ । प्रदेश २ सरकारले २२ महिनामा उपलब्धिमूलक काम खासै नगरेपनि मन्त्रीहरुलाई सेवा सुविधार सुख सयलमा कुनै कमि नराखेको समाचार छ । उनीहरुले तीनवटासम्म सरकारी गाडी उपभोग गरिरहेका छन् । केही मन्त्रालयले नयाँ गाडी खरिद प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएका छन् ।
त्यस्तै अन्न्पूर्णमै अर्को व्यानर न्युजमा सभामुख बन्न तुम्बाहाम्फेको दौड भनेर छापिएको छ । उपसभामुख डा. शिवमाया तुमबाहाम्फेले संसदलाई बन्धक नबनाउन आग्रह गरेकी छन् । सभामुखबारे छिटो निर्णय गर्न उनले नेकपा अध्यक्षद्धय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालसमक्ष आग्रह गरेकी छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार भएको भेटमा उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले आफूलाई नै सभामुख बनाउन प्रस्ताव गरेको स्रोतले बताएको छ ।
त्यस्तै आजको राजधानी दैनिकले बन्द कोठामा आगो ताप्दा बेहोस् भइएला भन्ने समाचारलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
जाडोको मौसममा बन्द कोठाभित्र हिटर, ब्रिकेट वा दाउरा बालेर न्यानो मानिरहनुभएको छ भने त्यसमा सजग हुन जनाएको छ । बन्द कोठाभित्र त्यसरी आगो ताप्दा अक्सिजनको मात्रा कमि भएर बेहोस पनि हुन सकिन्छ । चिकित्सकका अनुसार धेरै लामो समयसम्म बन्द कोठामा आगो ताप्दा कार्बन मनोअक्साइट उत्सर्जन हुने र त्यसले रगतमा अक्सिजनको मात्रा कम गराई मानिस बेहोस समेत हुन सक्छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहको अनुगमन गर्दै अख्तियार भनेर राजधानीमै अर्को समाचार छापिएको छ । स्थानीयतहलाई सच्चिन ६१ बुँदे निर्देशन दिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती तहहरु सच्चिए नसच्चिएको बारेमा आफै अनुगमन गर्न थालेको छ ।
स्थानीयतहमा अनियमितता र विकृति बढेको भन्दै त्यसविरुद्ध अख्तियारमा अत्यधिक उजुरी परेपछि अख्तियारले ७ सय ५३ वटै स्थानीय निकायमा कार्यशैली सुर्धान र अनियमितता रोक्न निर्देशन दिएको हो ।
आजको कान्तिपुर दैनिकले ‘झन कस्सियो गाँठो’ भन्ने समाचारलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रतिनिधसभा सभामुख बिहिन भएको चार महिना भयो । सत्तारुढ नेकपाका दुई अध्यक्षहरु सभमुख पद ‘खोसाखोस’ मै अल्झिएका छन् । उनीहरुको अडान सभामुख चयनमा झनै अन्योल बढेको छ ।
यहि विषयमा नेकपाका दुई अध्यक्षवीच अडान कायमै रहेको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भन्छन्–सचिवालयका नौ सदस्यमध्ये चारजना हामीलाई सभामुख दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । बादलजीको पनि लाइन यहि हो । विषय टुग्याइ हालौं । तपाईले अडान छाड्नुपर्यो ।’
अर्का अध्यक्ष केपी ओली भन्छन् ‘तपाई छुट्टा छुट्टै भेला गरेर हाम्रा टाउका छन् भनेर बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ, पछि संसद्बाट सहयोग हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? सरकार चलाउन मैले रोजेको व्यक्ति चाहिन्छ ।’
उता उपसभाुमख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे भन्छिन् –तपाईहरु सहमति गर्नुभएको छैन, अनि मलाई दोष दिनुहुन्छ । मैले गर्दा सभामुख चयनमा बाधा पुग्यो भन्ने छ भने मलाई महाभियोग लगाएर हटाउन सक्नुुहुन्छ ।
कान्तिपुरमै कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई चेतावनी दिएको समाचार छ । सभापति देउवाले आफूले पार्टीलाई एक बनाउन तयार रहेको तर अरुले निहुँ खोज्न थाले ‘नछाड्ने’ बताएका छन् । उनले वरीष्ठ नेता पौडेल पक्षधरलाई लक्षित गर्दै निहुँ खोज्दै गए महाधिबेशन समेत तोकिएको समयमा नगर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
त्यस्तै आजको गोरखापत्रले संगीत सुन्दा पनि धेरै रोग निको हुने समाचार रहेको छ ।
संगीतबाट पनि उपचार हुन्छ भन्ने सुन्दा कतिलाई त अनौठो लाग्न सक्छ तर यो अनोैठो नभएर विश्वमा स्वास्थ्योपचारका विभिन्न पद्धतिमध्ये संगीत चिकित्सा (म्युजिक थेरापी) पनि एक राम्रो माध्यम रहेको बताइएको छ ।
यसले स्वास्थ्यमा मात्र नभई जीवनशैलीलाई नै आनन्ददायी र सुखमय बनाएर जीवनलाई सरल र स्वस्थ्य बनाउने आयुर्वेदाचार्य हेमकुमारी आचार्य बताउँछिन् ।